NANG KYAR OO (နန်းကြာဦး): 2011
ဒီကနေ့Denver မှာ နှင်းတွေ အရမ်းကျပါတယ် ။ ဒီနှစ် နှင်း ကျတာ မနှစ်ကထက် စောတယ်။ မနေ့ညကတည်းကကျထားတဲ့ နှင်းဟာ ကျွန်တော် အလုပ်သွားခါနီးကြည့်လိုက်တော့ လမ်းမှတလျှောက် ဖွေးနေပါပြီ ။ ဒီလို နှင်းကျချိန်မှာ အလုပ်သွားရတာ ၊ အပြင်သွားရတာ အရမ်းစိတ်ညစ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ အလုပ်သွားဖို့အိပ်ရာကနိုးတော့မနက် ( ၄း၀၀)ပါ ။ ဒါက ကိုယ့်ကား ယူသွားရင် ထတဲ့ အချိ်န် ၊ ဘတ်(စ်)ကား နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ မနက် (၃း၃၀) ထရတာပါ ။ ဒီလို နှင်းကျပုံနဲ့ တော့ ဘတ်(စ်)ကား ဂိတ်မှာ စောင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကားစောင့်ရင်းနဲ့တောင့် သွားလိုက်မယ် ။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ကားယူသွားရတယ်လေ ။
အလုပ်ကပြန်လာတာနဲ့ဒီနှစ် နှင်း ပထမဆုံးကျတဲ့နေ့ ကို အိမ်ဘေးနားက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဓတ်ပုံ အနည်းငယ်ရိုက်ထားလိုက်တယ် ။
ဒဲာလို နှင်းကြားထဲမှာ အလုပ်သွား ၊ အပြင်သွားရတဲ့ အခါ အ၀တ်အစားဝတ်တဲ့အခါ လူကို ကောက်ညှင်းထုပ်
လိုပါပဲ ။ အ၀တ်အစားကို အထပ်ထပ်ဝတ်ပြီးမှ အပြင်သွား၇တာပါ ။ အခု ဒီဘလော့ရေးတဲ့ အချိန်မျာတော့ နှင်း
ကျတာစဲသွားပါပြီ ။ လမ်းတွေ ၊ ကားတွေ ၊ သစ်ပင်တွေပေါ်မှာတော့ နှင်းတွေက တင်ကျန်နေခဲ့တုန်းပါပဲ ။
colorado..( Daenver ) ကိုရောက်ရင် လာလည်ကြနော် ။ နှင်းတောထဲမှာ လျှောက်လည်ကြတာပေါ့..။
Posted by Kosai Wanna at 14:274comments:
စိုင်းထီးဆိုင် နှင့် အမေရိကန် HIP HOP...
ကျွန်တော် အရင်ကအမေရိကားရောက်မြန်မာနိုင်ငံ လူတွေ ဆိုပြီး ပိုစ့်တစ်ခု တင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ အမေရိကားမှာ ကျွန်တော် ကားမောင်းရင်း ကြုံတွေ့ ခဲ့ရပုံလေးကို ရေးတတ်သလို ရေးသွားပါ့မယ် ။
ကျွန်တော် အမေရိကား ကိုရောက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ ကားမောင်းလိုင်စင် လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လိုင်စင် လုပ်တာကလည်း လွယ်မှလွယ် ဗျို့ ။ ဒီလွယ်လွန်းတာကြောင့်လည်း နောက်ပိုင်း ဒီကားမောင်းလိုင်စင် ကိစ္စကြောင့်စိတ်ညစ်ခဲ့ရပုံကို အချိန်ရရင် ရေးပါအုံးမယ် ။ ကျွန်တော်လည်း လိုင်စင်ရပြီး တော်တော်ကြာမှ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အဆက်သွယ်နဲ့ ကားလေးတစ်စီးဝယ်စီးဖြစ်ပါတယ်။သိပ်တော့ဈေးမကြီးပါဘူး ဒေါ်လာ (၁၈၀၀)ပါ ။ 1997 မော်ဒယ် ပါ ။ အမေရိကန် အမျိုးအစားပါပဲ ။ အောက်ကပုံပါ။
ဒီကား ၀ယ်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ COLORADO မှာ ကားမောင်းလိုင်စင်တွေ ပြန်သိမ်းတော့တာပါပဲ ။ တရား
မ၀င် ပိုက်ဆံပေးပြီး လုပ်ထားတဲ့ ကားမောင်းလိုင်စင် မှန်သမျှ စာတိုက်ကနေ စာပို့ ပြီးပြန်လာအပ်ခိုင်းတာ
ပါ ။ ကျွန်တော် ဆီလည်း စာရောက်လာတော့ ပြန်သွားအပ်ရတာပေါ့ ။ ကားမောင်းလိုင်စင် ပြန်ဖြေနေရတဲ့ 
အချိန်မှာ ၀ယ်ထားတဲ့ ကားကို ဒီအတိုင်းထိုးထားရပါတယ် ။ကား ရှိပြီး ဈေးဝယ်ထွက်ရင်တော် ဘတ်စ်ကား
ပြန်စီးနေရတဲ့ အဖြစ်နော် ။ လိုက်ချင်အုံးဟဲ့ အလွယ်လမ်း ။နောက်ကျရင် ဒီကားမောင်းလိုင်စင် ကိစ္စရေးအုံး
မှာ ။ လိုင်စင် မရှိတဲ့ အချိန်မှာ ကားကို ပြတင်းပေါက်က လှမ်းကြည့်ပြီး ကြည့်သာကြည့် မမောင်းရတဲ့ ဘ၀
ပါလားနော်လို့တွေးမိခဲ့၇ပါသေးတယ် ။ ဟုတ်တယ်လေ ကား ၀ယ်ပြီး နှစ်လ လောက်ပဲရှိသေးတယ် လိုင်စင် ပြန်အပ်လိုက်ရတာဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့ ။
အသိတော့ တစ်ခုရသွားပါတယ် ၊ အမေရိကား ကို လာမည့်သူတွေ အားလုံးလည်း မှတ်ထားကြပါ ။ အမေရိကား မှာရှိနေစဉ်အတွင်းတော့ အစိုးရ နဲ့ဆက်ဆံ၇မည့် ကိစ္စ ၊ ရုံး တွေနဲ့ ဆက်ဆံ
ရမည့် ကိစ္စ မှန်သမျှ ပိုက်ဆံပေးလုပ်လို့ ရတယ်လို့ပြောလာလို့ ရှိရင် လုံးဝ မလုပ်ပါနဲ့ တော့ ။ တချိန် မဟုတ် တချိန် ပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ။ ပြန်ပေါ်လာတဲ့ အချိန်ဆို ပိုပြီး စိတ်ညစ်ရသလို ပိုက်ဆံလည်း ပိုကုန်သလို ကိုယ်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းပါ မကောင်းဘူးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုး ပိုက်ဆံ လုံးဝ
ပေးလို့မရပါဘူး ။ ဒါက ကျွန်တော် အသိပေးတာပါ ။ ကားမောင်းလိုင်စင် ပြန်ဖြေပြီး လိုင်စင်ပြန်ရတော့ အ
တိုးချပြီး မောင်းတော့တာပါပဲ ။ ကျွန်တော် ကလည်း ကား အနိမ့်ထက် အမြင့် ကို ပိုကြိုက်ပါတယ် ။ ဈေး ထဲ
က ကန်းစွန်းရွက်ရောင်းတဲ့ လူ နာမည် အမြင့် ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် ။ တော်ကြာ မှားကုန်မယ်။ ကား
အနိမ့် အမြင့်ဆိုတာကလည်း BODY ကိုပြောတာပါ ။ တော်ကြာ ဒီပိုစ့် ရေးတဲ့ကောင် တော်တော်ကြွားတယ်
လို့ ထင်မှာစိုးလို့ ပါ ။ ဒါကြောင့် အရင်က ကား အနီလေးကိုပြန်ရောင်းပြီး 2004 မော်ဒယ် ဒီကား ကိုပြန်ဝယ်
ဒီကား ကိုဝယ်ပြီး နေ့ တိုင်း ကျွန်တော်ရဲ့မဟေသီ နန်းနန်း ကိုညနေဆို အမြဲတမ်း သူ့ အလုပ်ဆီကို သွား
ကြိုပါတယ် ။ သွားကြိုမှ ...မဟေသီက ကျွန်တော် ဒီကား ၀ယ်တာသိပ်အမြင်ကြည်တာ မဟုတ်ဘူး ။ ဒါကြောင့် အမြင်တွေကြည်လင်သွားအောင် နေ့ တိုင်းသွားကြိုပေးနေရတယ် ။ တနေ့ တော့ မဟေသီ ဆီအ
သွား မီးပွိုင့်တစ်ခုအရောက်မှာ ရပ်နေပ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်ဟာ စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်းလေးကို ညဉ်းနေပါတယ် ။ ကား မှန်ကိုလည်း မောင်းတဲ့ဘက်ခြမ်း ကိုထွင့်ထားပါတယ်။ ခဏ္ဏကြာတော့ ကျွန်တော်
ရဲ့ ကားဘေးကို အမေရိကန်ဖွား ကိုအမည်း ( ကပ္ပလီ ) နှစ်ယောက် ရဲ့ ကားတစ်စီး လာရပ်ပါတယ် ။
ဒီပွိုင့် ဟာ သာမန်အချိန်ဆိုလည်းကြာတတ်ပါတယ် ။ ညနေ အလုပ်ပြန်တဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ပိုကြာပါတယ် ။ ကိုအမည်းတွေက သူတို့ ရဲ့HIP HOP ကို ဘေးက ကားတွေမှ အားမနာ အကျယ်ကြီး ဖွင့်
ကာလိုက်အော်ဆိုနေပါတယ် ။ အမေရိကားမှာ အားနာတဲ့ စနစ်မရှိပါဘူး ။ အမေရိကား ရောက်လာကြရင်
အားမနာကြပါ နဲ့ကြိုက်ရင် ကြိုက်တယ် ၊ မကြိုက်ရင် မကြိုက်ဘူး ဗြောက်ပြောပါ ။ အမေရိကား မှာ အားနာရင် ကိုယ်ရဲ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ် ။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီကောင်တွေ အားမနာ စွာဖြင့် အကျယ်ကြီး ဖွင့်နေတာပါ ။ ကျွန်တော် တို့မြန်မာရွှေတွေကသာ အားမနာရန်ကောဟုဆိုတာတွေးမိကြတာ
ပါ ။ ကျွန်တော် လိုက်ဆိုနေတဲ့ စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်းလေးတောင် ဒီကောင်တွေ ဖွင့်နေတာနဲ့ဘယ်ရောက်
သွားမှန်း မသိတော့ပါဘူး ။ ကိုအမည်းတွေက ကျွန်တော် ကိုကြည့်ပြီး သီချင်းဆိုနေမှန်း သိလို့တမင်သက်
ဟဲ..ဟဲ.. မြန်မာနိုင်ငံက လာတဲ့သူကို ဒီလိုလုပ်လို့ ရမှာလား ။ သူတို့HIP HOP လောက်တော့ ပျင်း
သေး။ ကျွန်တော် လည်း ကားမှန်တွေ အကုန်ချ ၊ ကား CD PLAYER ကို ခဏ္ဏပိတ်၊ နောက်ပြီး စိုင်းထီးဆိုင် ရဲ့" ချစ်တဲ့ ရှမ်း ရိုးမ " ဆိုတဲ့ သီချင်းကို အစပြန်ဖွင့် လို့ ရအောင် အဆင့်သင့်လုပ်ထားပါတယ် ။ ဒီအချိန်မှာ ပွိုင့်က စိမ်းလို့ကားတွေ တဖြည်းဖြည်းခြင်း ဘီးလှိမ့်ကာ သွားနေတဲ့ အချိန်လည်းရောက်ရော
အဲဒီတော့မှ ကျွန်တော် စိုင်းထီးဆိုင် ရဲ့' ချစ်တဲ့ ရှမ်း ရိုးမ " သီချင်းကို VOLUME အကုန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ
တယ်။ ပထမတော့ အမည်းကောင်တွေ ကြောင်သွားပါတယ် ။ သူတို့ ထင်တာ HIP HOP လို့ ထင်တာကိုး။
နောက်တော့ တခါမှ မကြားဖူးတဲ့ တဒေါင်ဒေါင် နဲ့ အသံအကျယ်ကြီးထွက်လာတော့ ကျွန်တော် ကိုကြည့်
ပြီး ခေါင်းခါ သွားပါတယ် ။ ကျွန်တော် ရဲ့ကား အသံက သူတို့ ကားထက်ပိုကျယ်တော့ သူတို့ လည်း သူ
တို့ ရဲ့ ကားမှန်ပို ပိတ်ကာ တခြားလမ်း ကို ကူးသွားပါတယ် ။ သူတို့ ရဲ့ ဖြစ်ပုံကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော် ဆို
အရမ်း ရယ်ချင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ စိုင်းထီးဆိုင် က အမေရိကန် HIP HOP ကို အနိုင်
ယူလိုက်ပြီလို့ ။ နောက်ဆို ကျွန်တော် ရဲ့ ရှေ့ မှာ HIP HOP လာဖွင့်ပြတဲ့ သူဆိုရင် စိုင်းထီးဆိုင် နဲ့ 
တွေ့ မယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ် ခင်ဗျာ...............။
လေးစားလျှက် ( စိုင်းမြင့်ထွန်း )....
Posted by Kosai Wanna at 18:00 No comments:
car funny လေးပါ.................
ပင်ပန်းမှုတွေ ကို ပြေပျောက်သွားရအောင် ကြည့်လိုက်နော်..........
ရယ်မောခြင်းဖြင့် ဘ၀အမောတွေ ပြေပျောက်နိုင်ကြပါစေ ဗျာ.............
ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့်.......( စိုင်းမြင့်ထွန်း )
Posted by Kosai Wanna at 20:17 No comments:
ကျွန်တော် ရဲ့ဘလော့ကို လာရောက်လည်ပတ်သူ အားလုံးကို စာမပြန်နိုင်တဲ့ အတွက် အထူးအနူးအညွတ်
တောင်းပန်အပ်ပါသည် ခင်ဗျာ ။ ကျွန်တော် ရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ ပျက်စီးသွားသည့် အတွက် လုံးပန်းနေရလို့ ပါ။လာရောက်လည်ပတ်ကြသောမိတ်ဆွေအလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် ခင်ဗျာ ။ ယခုမှစ၍ ပို့ စ်များကို ပြန်လည် တင်ဆက်ပါမည် ခင်ဗျာ ။
Posted by Kosai Wanna at 22:24 No comments:
ကွန်ပျူတာပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေပါ
ကွန်ပျူတာပိုင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေပါ ။ စိတ်ကူးကောင်းကြပါတယ် ။
အစ်မ ၀မ်းကွဲ မေးလ်နဲ့ ပို့ ပေးတဲ့ပုံတွေကို လာလည်ကြတဲ့ မောင်နှမတွေ ကြည့်ရအောင်
တင်လိုက်တာပါ ။ (( ပုံလေးတွေ လှုပ်ရှားမှု မရှိဘူးဆိုရင် ပုံပေါ်ကို ကလစ်ကြည့်လိုက်ပါ ။ ))
အချိန်ပေး၍ လာရောက်လည်ပတ်ကြသော မိတ်ဆွေမောင်နှမ အားလုံးကို အစဉ်လေးစားလျှက်...
( စိုင်းမြင့်ထွန်း ).......
Posted by Kosai Wanna at 21:20 No comments:
FUNNY CARTOON ......ပုံလေးတွေပါ ။
အစ်မ၀မ်းကွဲ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ( တပေါင်းသီ) ပေးပို့ လာတဲ့ ကာတွန်းလေးတွေ ကို
တင်လိုက်တာပါ ။ ကျွန်တော် ဆိုဒ်ကိုလာလည်တဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ ပြုံးပျော်
နိုင်အောင်ပေါ့ ဗျာ..........(( အကယ်၍များ ပုံလေးတွေက လှုပ်ရှားမှု မရှိဘူးဆိုရင် ပုံပေါ်ကို
ကလစ် လိုက်ပါ ။ )).....
လာမထိနဲ့ ..ဒီလိုဖြစ်သွားမယ် ...
ရင် ..ပေါက်အောင် ချစ်တယ်..
မိန်းမ ဆိုတာလျှာရည် မျိုးလေ..
နင်လား တစ္ဆေ ..ဒါဘဲ ထင်တယ်
အားလုံး ပြုံးပျော်နိုင်ကြပါစေ ......
( ရှမ်း ပဲပုပ် ပါ ..)........
Posted by Kosai Wanna at 19:24 No comments:
မြန်မာ အင်တာနက် နဲ့ဟစ်တလာ....
မြန်မာနိုင်ငံက အင်တာနက် အခြေနေကြောင့် တကမ္ဘာလုံးကြောက်ခဲ့ရတဲ့ "ဟစ်တလာ" တောင်ဘယ်လိုမျိုး
ဖြစ်သွားတယ်ဆို သိရအောင် ကြည့်ကြပါအုံးဗျာ ။ ဒါကို ကြည့်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက အင်တာနက်သုံးတဲ့သူ
မှန်သမျှတော့ အကုန်ဖြစ်နေကြပြီနဲ့ တူတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ ထင်တယ်ဗျာ ..ဟီး ။ ဘာဖြစ်လဲ သိရ
အောင် အောက်မှာကြည့်ကြနော် ။
လာရောက်လည်ပတ်သော မိတ်ဆွေများကို အစဉ်ထာဝရ လေးစားလျှက်ပါ ။ comment က ဘာကြောင့် ပေးလို့ မရတာလဲ မသိဘူး ဗျာ ။ box မှာပဲအော်ခဲ့ကြတော့နော် ။
ရေခြား မြေခြား အလွမ်း.......
ညီမ( jasmine) ရေးပေးတဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ပါ ။ ခံစားလို့ အရမ်းကောင်းတယ် ။ ကျွန်တော် နဲ့ တော့
ကွက်တိပဲ ။ ဖတ်ကြည့်ကြနော် ။ ဝေဖန်မှုလေးလည်း ပေးကြနော် .........
ရေခြား မြေခြား အလွမ်း
တောင်ပေါ်က ရှမ်းလေး ရမ်းသန်းရောက်လာ
သာသာ ယာယာထင်ပြီး စိတ်ကူးနဲ့ရူးခဲ့ရ။
ဘီယာ ၀ီစကီ စုံလင်သော်လည်း
တိတ်တိတ် ခိုးသောက် ရွာစဉ်တစ်လျှောက်
ရှမ်းပဲပုတ် ငြုပ်သီး မုံညင်းချဉ်
တစ်ကယ် အဟုတ် သတိရတာအမှန်ပါ။
၁၂ လရာသီ အကုန်လုံး
တရွေ့ပြီး တရွေ့နဲ့အလွမ်းတွေ အငွေ့ဖြစ်ရင်အကောင်းသား။
ဒါပေမယ့် ဖားတော့ မပါခဲ့ပါ။
Posted by Kosai Wanna at 19:04 No comments:
ကျွန်တော် သည်အချိန်မအားလပ် ပါသဖြင့် ဘလော့ကို မ၀င်ရောက်နိုင်သောကြောင့် အသစ်များ မတင်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။ ထို့ ကြောင့် လာလည်ကြသောမိတ်ဆွေအပေါင်း တို့ အားအနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါသည် ခင်ဗျာ ။ နောက်ပိုင်းတွင် ဘလော့ ကို အချိန်ပေး၍ လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေကြောင်း အသိပေးအပ်ပါ ခင်ဗျာ ။......
( စိုင်းမြင့်ထွန်း )..........
Posted by Kosai Wanna at 17:46 No comments:
တရုတ်လုပ် အမျိုးသမီးသုံး ဆံပင်ခေါင်းစည်းကြိုးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်
ကျွန်တော် ရဲ့ မေးလ်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို ပြန်တင်လိုက်တာပါ။
ကိုရွှေတရုတ် တို့ ကတော့လုပ်ရက်ပါပေ့ဗျာ ။ ဒီကိစ္စ က မိန်းကလေးတွေပါ မဟုတ်ဘူး ဆံပင်အရှည်ထားပြီး
နောက်မှာ ချည်ထားတတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေပါ သတိထားတော့ဗျို့။
comment ရော ပေးလို့ ရပြီလား မသိဘူးဗျာ ။ မရင်တော့ ကျွန်တော်လည်း မူးနောက်နေပြီ
ဘာဖြစ်လို့ လဲ မသိဘူးဗျာ ။ သိတဲ့သူရှိရင် ကူညီကြပါအုံးဗျာ ။ comment ပေးချင်လို့ ၊ပေးလို့မရဘူးဆိုရင် မေးလ်ကိုသာ ပို့ ကြတော့ဗျာ ။
တရုတ်ပြည်က ထုတ်လုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးသုံး ဆံပင်ခေါင်းစည်းကြိုး Hair Bands များ အကြောင်း။
စားသောက်ကုန်များ၊ ဆေးဝါးများသာမက လူသုံးကုန် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပါ သတိထား သုံးစွဲရမယ့် အခြေအနေတွေ ရှိပါတယ်။
ပြည်သူလူထု ကြီး ခင်ဗျာ....
ဈေးပေါတယ်၊ သက်သာတယ်၊ သုံးရတာ လွယ်ကူ အဆင်ပြေတယ် ဆိုတာလောက်ကို ကြည့်ပြီး ဘေးအန္တရယ် ကျရောက်နိုင်တာ၊ သုံးစွဲရ သင့်တော် မသင့်တော် ကိုပါ ထည့်တွက် စဉ်းစားပြီးမှ ၀ယ်ယူသုံးစွဲ သင့်ပါတယ်။
ဘေးဒုက္ခ ရောက်မှသာ မရှူနိုင် မကယ်နိုင်ဖြစ်ပြီး အချိန်လွန် ဆုံးရှုံးရ တာတွေ မဖြစ်စေချင်ပါ။
ယခုဖေါ်ပြတဲ့ ဆံပင် ခေါင်းစည်းကြိုးက တရုတ်ပြည်ကနေ ထုတ်လုပ်တာပါ။
ဒီ ဆံပင်ခေါင်းစည်းကြိုးဟာ ဈေးပေါပေါနဲ့ ရောင်းချသလို ၀ယ်ယူသုံးစွဲကြသူ အမျိုးသမီးထုဟာလည်း အရောင်အသွေးလှလှပပနဲ့ မို့ကြိုက်နှစ်သက် ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီဆံပင် ခေါင်းစည်းကြိုးကို သေသေချာချာ သတိပြု မိသူကတော့ အတော့်ကို ရှားပါလိမ့်မယ်။
အောက်ဖေါ်ပြပါ ပုံတွေ ကြည့်ရအောင်--
တွေ့တဲ့ အတိုင်းဘဲ - ဒီဆံပင် ခေါင်းစည်း ကြိုးတွေကို အရောင်လှလှ ချည်မျှင်လေးတွေနဲ့ ပတ်ထားတာကို ဖြေကြည့် လိုက်တဲ့ အခါ-- အတွင်းမှာ ကွန်ဒုံ (Comdom) တွေကို ထည့်သွင်းထားတာ တွေ့ ရပါတယ်။
ဒီ ဆံပင်စည်းကြိုးထဲမှာ သုံးတဲ့ ကွန်ဒုံတွေဟာ အသစ်စက်စက်တွေ မဟုတ်ဖူးလို့ သိရပါတယ်။
သုံးစွဲပြီးသား ကွန်ဒုံတွေဖြစ်လို့ရောဂါပိုးတွေ ကပ်တွယ် နေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကျဆင်းစေတဲ့ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါလို အခြားသော လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ရောဂါတွေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံကြရင် အမျိုးသမီးတွေဟာ ဒီဆံပင်စည်းကြိုးကို သုံးစွဲတဲ့နေရာမှာ ဆံပင်စည်း နေတုန်း လက်နှစ်ဘက် မအားတဲ့ အခါမှာ ဒီဆံပင် စည်းကြိုးလေးတွေကို ပါးစပ်မှာ ခဏ ကိုက်ထားကြတာမျိုး လုပ်လေ့ ရှိပါတယ်။
ဈေးပေါပေါနဲ့ရတဲ့ ပစ္စည်း တစ်ခုကြောင့် အင်မတန် တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့ မိမိဘ၀ အသက် ထိခိုက်မှာကို တွေးမိတိုင်း... ရင်လေးစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဒီလို ဆံပင်ခေါင်းစည်းကြိုးလေးတွေ တရုတ်ပြည်ကနေ ဘယ်လောက် များများ ရောက်နေလို့သုံးစွဲထားကြပြီလည်း မပြောတတ်တော့ပါဘူး။
မေးလ်ထဲရောက်လာတဲ့ စာလေး တစောင် ပါ...
မြန်မာအမျိုးသမီးများအတွက်သတိထားနိုင်အောင်ဖြန့်ဝေပေး တာပါခင်ဗျ
.... ကျနော် စစ်ကိုနိုင် ၈၈၈၈.ပါ
လေးစားလျှက် ( စိုင်းမြင့်ထွန်း)......
Posted by Kosai Wanna at 17:36 No comments:
ဆရာ လှိုင်မြင့် ရေးသားထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို သဘောကျလို့ကူးယူ
ပြီးတင်လိုက်တာပါ ။ ဖတ်ကြည့်ကြပါအုံး...နည်းနည်း စာလုံးကြမ်းလေးတွေကိုတော့ ခွင့်လွတ်ပေးကြပါဗျာ ။
ရေးရတာလဲ တချိန်လုံး ကလော်ဆဲတာတွေချည်းဖြစ်နေတော့ ကြာရင်စာဖတ်သူတွေကတောင် ကျနော် ကို စိတ်မှမှန်သေးရဲ့ လားထင်စရာ ရောက်နေပြီ ။ ခက်တာကလဲ ဗိုလ်သန်းရွှေက လုပ်လိုက်ရင် တိုင်းပြည် နာစေတာချည်းလုပ် ကျနော်ကလဲ ဓါးခုတ်ရာလက်ဝင်လျှို လို့ပြောစရာဖြစ်အောင် ကလဲ ၀င်ဝင်ပါတတ်မိတယ် ။ ရှေးရေစက်လားလို့တောင်ထင်ရတယ် ။ အရေးထဲ အမျိုးကတော်လိုက်သေးတယ် ။ အမျိုးမတော်ရခင်ကိုက ကျနော့်စကား သူ့ ကိုဆော်ကားမိလျှက်သားဖြစ်သွားတယ် ။ ကျနော် ခယ်မက ပထမ အိမ်ထောင်ရှိတယ် ။ ပထမအိမ်ထောင် နဲ့က ဟိုက အသက်၁၉-နှစ်ကြိးတယ် ။ အရေးအခင်းပြီးစ န.၀.တ လက်ထက်ပထမဆုံး နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းကန်ထရိုက်ကို ရသူပါ။ ပြီး ရုပ်ရှင်မင်းသမီးပေါက်စ နံမည်ကျော်နဲ့တွဲ မယားကို အရာမသွင်းတော့ ကွဲကြတာပေါ့ ။ န.၀.တ တင်ပေးတဲ့ န့မည်ကျော်မင်းသမီး နံမည်ကြီး ပိုင်းလုံးမ ပါဗျာ။ ဗွန်ကြောင်သူတွေ အတော်များများ အပိုင်းခံရပါတယ်ဗျာ ။ ပိုင်းနည်းသင်တန်း ပို့ ချရင်တောင် နံမည်ရနိုင်တယ် ။
အဲဒီမှာ ဗိုလ်သန်းရွှေသားက ဆုံပြီး ခယ်မကို အသေကပ်ပါလေရော ။ သူ့ ကို ပြန်မကြိုက်ရင် သူ့ကိုသူပါသေနတ်နဲ့ ပစ်သတ် ဇူဆိုဒ်လုပ်မယ်တွေလုပ်ပါလေရော ။ ခယ်မလဲ ကျနော်ကိုတိုင်ပင်ပေါ့ ။ ကျနော်ကတော့ပြတ်တယ် ။ အရေးမလုပ်နဲ့။ မယူနဲ့။ ဒီကောင်တွေက အဖေကစ လူစိတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး ။ ပြိး ဘာအရည်အချင်းမှ မရှိတဲ့အပြင် အရည်အချင်းရှိသူကိုတောင် တန်ဖိုးထားရမှန်း ပညာရှင်တန်ဖိုးကိုတောင် နားမလည်သူ တွေပေါ့ ။ ပြီးအာဏာ အှရိန်နဲ့နောင်ဆော်လေးတွေ ကကပ်ရင်ွှရင်လင်လိုဘဲ ဗွန်ကြောင်အုံးမဲ့ အကောင်ပေါ့ ။ စကားက ဟိုအထိရောက်တော့တယ် ။ ပြသနာက အဲဒီကထည်းက ကျနော်က ဆော်ကားတယ် လူပါးဝတယ် စကာပြောမိုက်ရှီုင်းတယ် တွေဖြစ်ရော ။ မတတ်နိုင်ဘူး ။ ကိုယ်စိတ်ထဲ ထင်တဲ့အတိုင်းပြောတာလေ ။ အခု မယ်မကပြောတတ်တယ် ကိုလှိုင်မြင့်ပြောတာ ကွက်တိ မှန်ပါ့တဲ့ ။
အားလုံးကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသားဆိုတော့ သဘောတော်ကျနေကြတာပေါ့ ။ အပြတ်ကန့် ကွက်သူက ကျနော်တယောက်ထဲ ။ ကန့် ကွက်တာထက် ပက်ပက်စက်စက်ပြောတာ ကိုသူတို့ ဖက်ကနာတာ ။
ထားတော့ ။ ၁၉၉၁- လောက်မှာ န.၀.တ ဟာ ရတနာဓါတ်ငွေ့ သိုက်ကိုတွေ့ လိုက်ပါတယ် ။ အဲဒီတော့ ဓါတ်ငွေ့ ကို ရောင်းဖို့ ကို ထိပ်ကထားစဉ်းစားတယ် ။ ပညာမတတ်တော့ သုံးစွဲပြီး စွမ်းအင်ဖူလုံအောင်လုပ်ပေးရင် တိုင်းပြည်ပိုတိုးတက်မယ်ဆိုတာမမြင်နိုင်ဘူး ။ ရောင်းစားရင် ပိုက်ဆံရမယ်လောက်သာမြင်တာ ။ မဆန်းပါဘူး ။ အသိက ဒီလောက်ဘဲရှိတာကိုး ။ ပိုဆိုးတာက ပြည်တွင်းသုံးစွဲရင် ကျပ်ငွေဘဲရမယ် ။ မြန်မာ့အစိုးရလုပ်ပြီး ကိုယ်ကျပ်ငွေ ကို မလိုချင်တာကတော့...ပြင်ပမှ အထင်ကြီးတာဘယ်သူလဲ ပြန်မေးကြည့်ပေတော့ ။ ကိုယ်ပစ္စည်းကိုကိုယ်ပြန်မသုံးချင် မလိုချင်မှတော့..သူ့ အလုပ်က မဟန်လို့ပေါ့ ။
အဲဒီမှာ ဓါတ်ငွေ့ ရောင်းမယ်ဆိုပြီး ၀ယ်လိုသူတွေကိုတင်ဒါခေါ်ပါတယ် ။ ၁၉၉၄-ခုနစ် ကုန်လောက်မှာ ခေါ်ပါတယ် ။ အဲဒီကနေ ၁၉၉၅-လောက်မှာ ကျနော်ဟာ မိတ်ဆွေ ပြင်သစ် ကုမ္မဏီကြီး- ၂-ခု ပူးပေါင်း ( နံမည်ထုတ်ဖေါ်ရန်မသင့်ပါ ။ သို့ ပေမဲ့ ပြင်သစ်မှ ကြီးမားသော ကုမ္မဏီကြိး-၂-ခု ဖြစ်ပါတယ် ) နဲ့ဓါတ်ငွေ့ ကို မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အကုန် သုံးစွဲရန် ဖွံ့ ဖြိုးမှု မရှိသေးတော့ တပိုင်းကိုရောင်း တချို့တ၀က်ကိုပြည်တွင်းသုံးရန်တင်ပြပြီး ဒီကုမ္မဏီ-၂-ခုမှ စီမံကိန်းကြီိးတွေ တင်ပြပါတယ် ။
တင်ပြထားတာကတော့ ထိုင်းကို အခုလက်ရှိ ပိုက် လက္မ-၄၈- အထိ မပေးဘဲ ၃၆- လက္မခန့် သာပေးပြီး ရန်ကုန်ကို ၃၂-လက္မ ဆိုဒ်ပိုက်နဲ့ သွယ်ယူပြီး တွံတေးမြို့ အနားမှာ- ၅၀၀-မီဂါဝပ် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားစက်ရုံ -၂-ခု နင့် တနေ့ လျှင် တန်ချိန်- ၁၈၀၀- ကျမည့် ဓါတ်မြေသြဇာစက်ရုံ ၂- ခု တည်ဆောက်ရန် တင်ပြပါတယ် ။ အဲဒီတင်ပြတဲ့ ပိုက်ဆိုဒ်ကို ဗိုလ်သန်းရွှေက လက်မခံလို့ပိုက်အသေးနဲ့ပြန်တင်ပြီး လျှပ်စစ်စက်ရုံတခု..ဓါတ်မြေသြဇာစက်ရုံတခု အထိ ထပ်လျှော့တင်ပြရပါတယ် ။
၂၀၀၅ -မှာ ကုမ္မဏီတွေ အများထဲက ဆန်ကာတင် ကုမ္မဏီ ငါးခု ရွေးပါတယ် ။ အဲဒီအထိ ဒီပြင်သစ်ကုမ္မဏီ ပါသေးတယ် ။ နောက် ဆန်ကာတင်- ၃-ခု လုပ်တဲ့အထဲ ပါမလာတော့ပါ ။ ကြားတာကတော့ ထိုင်းက သူ့ မိသားစု ဆီဝင်လိုက်ပြီ ။ နောက်ဆုံးတော့ အခုထိုင်းကို လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါတယ် ။ ပထမပိုင်းမှာ အဲဒီတု့းက စွမ်းအင်ဝန်ကြီးက အတော်လေးသဘောကျနေတာပါ ။ ပြည်တွင်းသုံးလဲပါတယ် ။ ရန်ကုန်မှာ မီဂါဝပ်-၁၀၀၀- လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရင် တမြို့ လုံးမီးထိန်ထိန်လင်းပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ တိုးလာမယ်စီမံကိန်းလေ ။ မရဘူး ။ ဘဘကြီးဗွီတို ဘဲ ။ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေသာ သဘာဝလျှပ်စစ်လုံလုံလောက်လောက်ရနေမယ်ဆိုရင်..အခုလို စက်ရုံကြိးတွေ ကိုယ်ပိုင်မီးစက်တွေနဲ့ လည်မနေရဘူးဆိုရင် ဘယ်လောက်လုပ်ငန်း အတွက်အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာကတော့..ထမင်းစားသူတိုင်း သိပါတယ် ။
အခုတော့ သူ့ သဘောက ဖိုင်နယ်ဘဲ ။ သွားပါလေရော ။ တမြို့ လုံး အိမ်တိုင်းရုံးတိုင်း မိးစက်တွေ တ ထုံးထုံးနဲ့ ။ မီးအားလဲ စိတ်တိုင်းကျမရနိုင် ကုန်ကျငွေကလဲ သဘာဝလျှစစ်အတွက်ကုန်ကျရတာရဲ့ငါးဆ -မှ ၈-ဆ ပိုကုန်ကျရပါတယ် ။ တနိုင်ငံလုံး တရုတ်မီးစက်တွေ ၀ယ်လိုက်ရတဲ့ငွေက ဒေါ်လာနဲဆို..သန်း-၅၀ -မက ရှိနိုင်ပါတယ် ။ ဒီကြားထဲ မီအားထိန်းစက် ( Voltage regulator ) မီအားမြှင့်စက် ။ မီးအားမမှန်တော့ ထားရတဲ့ ရေခဲသေတ္တာ မီးအားကာကါယ်စက် ( Safe Guard ) စတာတွေဟာ နှစ်စဉ်..တိုင်းပြည်ကကုန်ကျရတာ ဒေးလာ-၁၀ -သန်းမကဘူး ။ ဒေါ်လာ၁၀-သန်းဆိုတာ ပြည်မြို့ က ဧရာဝတီမြစ်ကူးတံတားကြိးရဲ့ အပေါ်က တံတားသံထည်တွေဟာ လေလံနဲ့ဝယ်တာ..ဒေါ်လာ-၁၂-သန်းဘဲရှိပါတယ် ။ ဖေါင်ကြိးရေကာတာဟာ အထဲက သံချောင်း ဘိလပ်မြေ ဒီဆယ်ဘိုးက..ဒေါ်လာ-၁၀-သန်းဘဲကုန်ကျပါတယ် ။
အဲဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နစ်စဉ် နစ်စဉ် အဲဒီ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ လုံးဝ မတတ်ရတဲ့ သုံးစွဲရန် လုံးဝမလိုတဲ့ အပိုလျှပ်စစ်ပစ္စညေးတွေ အတွက် မီးအားကိုထန်းရတဲ့စက်လေးတွေရဲ့အလားနေရင်း အပိုကုန်ရတဲ့ငွေဟာ..နစ်စဉ်နစ်စဉ် ပြည်မြို့ က ဧရာဝတီမြစ်ကူးတံတားကြိးတခုကို ဖျက်ဖြိုချပြစ်နေရတယ်လို့ သာမြင်ကြည့်ကြပါ ။ အဲဒါပြည်သူတွေရဲ့ ငွေတွေပါ ။ အဲဒါ ခင်ဗျားတို့မစဉ်းစားမိကြတဲ့ အစိုးရတရပ် ကိုယ်ကျိုးဘဲကြည့်မှုရဲ့ မမြင်သာတဲ့ ပေးဆပ်ရမှုတွေ ။ မတိုးတက်ရတဲ့အပြင် အပိုပါထပ်နာရတာ ။ အရှုံးချည်းဘဲ ။ အနာချည်းဘဲ ။ အုပ်စီးသူရဲ့သစ္စာမဲ့မှုကြောင့် ကျနော်တို့ ငွေတွေ တအိအိ ယိုစိမ့်ထွက်သွားရတာတွေပါ ။ ကိုယ်ကျိုးဘဲ တဘ်ို့ ဘဲကြည့်တတ်သူ တယောက် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရင်ဘယ်လောက်နာတယ်ဆိုတာ မျက်တောင် တဆုံးဘဲမကြည့်ဘဲ တလှန် မျက်စေ့တဆုံးကြည့်တတ်ကြပါ ။
ကြားထဲ ထိုင်းက ဓါတ်ငွေ့ တွေ ရတော့ စီိးပွားရေးပိုခိုင်မာ ပိုထောင်တက်လာ တော့ ဥပမာ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းပေါ့ ။ ကျနော်တို့ က သူတို့ ကိုမယှဉ်နိုင်တော့ဘူး ။ မယှဉ်နိုင်တော့ လုပ်အားခလဲသူတို့ လိုမပေးနိုင် ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက ကြားထဲ ဟိုကဖြတ် ဒီိကဖြတ် ဆိုတော့ နဲနဲ အခြေမကောင်းရင် ပြုတ်ရော ။ ဒီတော့မြန်မာတွေက ပတ်ပို့ ( နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ) ကလဲမလွယ်တော့ တရားမ၀င် ထိုင်းကိုထွက်လုပ်ကြရတော့ ဟိုက မြန်မာလုပ်အားတွေကိုဈေးပေါပေါ နဲ့လဲရ ။ ညစ်ပတ်ြ့ပီးထပ်အကျပ်ကိုင်တော့ အလွန် အမြတ်ရပြီး မျောက်အမြှီးနဲ့ မျောက်ပြန်ချည် ဆိုတာ ကျုပ်တို့ ဗမာ ခံရတော့တာ ။ ကိုယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ အားသာချက် သယံဇာတကို ကိုယ်ပြိုင်ဖက်နိုင်ငံကိုထိုးရောင်းတာဟာ သူခိုးဓါးရိုးကမ်း ဆိုတာ ဒါမှကွက်တိ ။ ပြောတော့ ကိုယ်လင်ကို ချစ်လှပါရဲ့အိပ်တော့လင်ငယ်အတွက် ဖင်ကိုခြင်ထောင်အပြင်ထုတ်ပေးထားတာ ဒါမျိုးပြောတာ ။ ပြောတော့ တပ်မတော်ဟာ အမျိုးသားရေးကိုဘယ်တော့မှသစ္စာမဖေါက်တဲ့ ။ ဒါကိုသစ္စာဖေါက်တယ်လို့ မခေါ်ရင် ပြပါအုံး ။
ပြည်ပအားကိုးပုဆိန်ရိုးအော်တယ် ။ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ဖင်ကို ခြင်ထောင်အပြင်ဖက်ခိုးထုတ်ပေးထားတယ် ။ အခုလဲ ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့ ကိုအကုန်လုံး တရုတ်ကိုထိုးရောင်းစားပြန်တယ် ။ တရုတ်ဆီက နိုင်ငံရေးဗွီတိုအာဏာသုံးပေးဖို့ကန့် ကွက်မဲ ကိုရဖို့တရုတ်တောင်းသမျှ ပေးလိုက်ရတာပါဘဲ ။ အဲဒါ တကိုယ်ကောင်းစိတ် ကြီးမားသူတွေ အတ္တအတွက် မမှန်တာတွေလုပ် တိုင်းပြည် ပြည်သူလူထု ထောက်ခံမှုမရတော့ ပြည်ပအားကိုးမုတ်တော့ဘူး ။ အားကိုးရတဲ့အဆင့်ထက်ကျော်သွားပြီ ။ ကျားကန်ပေးထားရတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီ ။ ပိုဆိုးတာက အခုတရုတ်က သူ့ လူမျိုးတွေရဲ့ စီးပွား နဲ့ အသက်အိုးအိမ် ကို အာမခံပေ့းရမယ်အထိ အကျပ်ကိုင်လာပါပြီ ။
အဲဒါဟာ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာ ကို ကျူးကျော်ဆော်ကားမှုပါ ။ တရုတ်ဟာ ဒီလိုတောင်းဆိုမှုမျိုးကို တခြားဘယ်နိုင်ငံကိုမှ မတောင်းဆိုသေးပါဘူး ။ နိုင်ငံတနိုင်ငံဟာ သူ့ လူမျိုးအတွက် အခြားနိုင်ငံတခုအပေါ် အဲဒီလိုအာမခံချက်မျိုးတောင်းဆိုခွင့်မရှိရပါဘူး ။ တောင်းဆိုနိုင်တာက သူ့ နိုင်ငံသားတွေ ရဲ အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးကိုသာ တင်ပြခွင့်ရှိတာပါ ။ ဥပမာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံထားတဲ့ ကိုညီိညီလွင်ကိစ္စ ကိုကြည့် ။ ကိုညီညီလွင်ဟာ မြန်မာလူမျိုးပါ ။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူ ထားတာမို့သူ့ ကိစ္စမှာ ၀င်ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတာပါ ။ ကိုညီညီလွင်နေရာမှာ တခြားအဖြူလူမျိုးပေါ့ အဖြူပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေသူကို ဖမ်းထားရင် ဘယ်နိုင်ငံကမှ ၀င်ပြောခွင့်မရှိပါ ။
။ ဒေါ်စုအိမ်ရေကူးလာခဲ့တဲ့ ယက်တော ။ ဒ့ါသူတို့ နိုင်ငံသား ။ အဲဒါပြောလို့ ရတယ် ။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေတဲ့ တရုတ်လူမျိုးအတွက် တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ ဘာမှ ၀င်ပြောခွင့်မရှိပါဘူး ။ အဲဒီတရုတ်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်နေလို့ ပါ ။ ဘာမှ မြန်မာနိုင်ငံအချုပ်အခြာအာဏာကျော်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး ။ တရုတ်လူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ။ သူတို့ ဟာ တရုတ်နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူး ။ ဒါဆို အမေရိကန် အခုအောစတေးလျှားမှာ တရုတ်တွေ တပုံကြိး ။ လောလောလတ်လတ် တရုတ်နိုင်ငံသားစစ်ကနေ အေမရိကန်နိုင်ငံသားသို့ ပြောင်းလဲခံယူထားတာ ။ သူ့ နိုင်ငံသားမဟုတ်တော့ရင် ဘာမှ ပြောခွင့်မရှိတော့ပါဘူး ။ အခုန.အ.ဖ အစိုးရ ကိုမ တရုတ်က လုပ်ပြတာ ဒါဟာ ( -ီး ) နဲ့ အထောက်ခံရတာပါ ။ ဒါအချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးတာ မဟုတ်ရင် ဘာလဲ ။
အခုတော့မဟုတ်ဘူး ။ ဗွီတို ကိုဗန်းပြပြီး ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးလာတဲ့ တောင်းဆိုမှုမျိုး ။ တရုတ်ကိုမေးကြည့်ပါ ။ သူတို့ ဒီလိုမျိုး အခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှုကိုဘယ်နိုင်ငံနဲ့ ပြောဘူးလဲလို့ ။ အဲဒါ ပြည်ပအားကိုးထက်နိမ့် သွားပြီ ။ ပြည်ပ ကို ဒူးထောက်တာ ဖြစ်သွားပြီ ။ ဒါမြန်မာလူမျိုးရဲ့ ဇာတိမာန်ကို ဒူးထောက်စေတာဘဲ ။ ဇာတိမာန် မကျန်တော့ဘူး ။ ဆွေမျိုးပေါက်ဖေါ် နဲ့တကယ်က အပေါက်ဖေါ် ပေးထားရတာ ။ စိတ်ကြိုက်သာချပေးတော့ ။
ဓါတ်ငွေ့ တွေ တွေ့ လာပြီး ထိုင်းနဲ့ ဒီဓါတ်ငွေတွေ စတင်ရောင်းပေးလို့ မှ မကြာခင်မှာ နယ်စပ်မှာနယ်မြေအငြင်းပွားမှုလေးလုပ်ပြပါတယ် ။ ဘာမသိညာမသိ စာရေးဆရာမကြီးကလဲ ထိုင်းဝေဖန်ရေးတွေရေး ပြီး ခေတ်ထပြလိုက်ပါတယ် ။ သူကလဲ သာရင်ဘက်ကူးရန် ၀န်မလေးသူလေ ။ အဲဒီမတိုင်ခင်ကတော့ အမှတ်-၅၄-ဆိုလား ခြံထဲမှာလာကျယ်ပြနေသေးတယ် ။ ကျနော်က ထောင်ထဲမှာ ရီချင်နေတယ် ။ ဘယ်လိုလုပ်တိုက်ရဲမှာလဲ ။ ဓါတ်ငွေ့ ကိစ္စ အတွက်ဟိုဘက်ကတော်တော်လေးပေးကမ်းထားတာ ။ ဖေါ်လိုက်ရင် ဖင်စုတ်သွားပါမယ် ။
အဲဒီလိုဘဲ ။ တိုင်းရင်သား ငြိမ်းအဖွဲ့ တွေ အများစုကို ၁၉၉၁- ၉၂ တွေမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးယူအပြီးမှာ ကန်ထရိုက်တွေပေးပါတယ် ။ ဥပမာ ( ဥပမာပေါ့ - စတင်းဂန်းအဖွဲ့ ကို ) ကို ပုဇွန် တန်၂၀၀- ပို့ခွင့် သစ် ကျွန်းတန်-၁၀၀၀-ပေါ့ ပေးပါတယ် ။ ငြိမ်းအဖွဲ့ တွေအတွက် လုံခြုံရေးဆိုပြီး ရန်ကုန်လာရင် ထောက်လှမ်းရေး- ၆ ( လေဆိပ်အနီးမှာ နေကြရတာများတယ် ) ။ အဲဒီကန်ထရိုက်ရထားတာကို ပွဲစားတွေဆီကို ထောက်လှမ်းကဘဲ တဆင့်ဆက်သွယ်ပေးတာပါ ။ သူတို့ ကို လုံခြုံရေးဆိုပြီး အကျယ်ချုပ်သဘောပါဘဲ ။ ပွဲစားတွေ ကုန်သည်တွေက ငြိမ်းအဖွဲ့ တွေနဲ့တွေ့ ချင်ရင် အဲဒီ ထောက်လှမ်းရေးဝင်းထဲ ၀င်တွေ့ ကြရတာ ။ အပြင်မှာတွေ့ ကြရင်လဲ ထောက်လှမ်းတပ်ကြပ်ကြိး ၂-ယောက်လောက်အမြဲပါတယ် ။
အဲဒီမှာ ဥပမာ ပုဇွန်တန်- ၁၂၀ -ကို ပါမစ်လေးတင် ကုန်သည်လက်ထဲအပ်ပေ့းလိုက်ရုံပါ ။ ထားပါတော့ တစ်တန်ကို အမြတ် တစ်သိန်းရရင် တန်-၂၀၀ အတွက် အမြတ် သိန်း- ၂၀၀ / လောက်ရတယ်ပေါ့ ။ အဲဒီမှာ ရန်ကုန်ရောက်နေသူ ငြိမ်းခေါင်းဆောင်တွေကို ခင်ဗျားက အမြတ်ထဲက သိန်း-၂၀-ယူ / ခင်ဗျားက ၁၅.သိန်းယူ နဲ့ထောက်လှမ်းက ခွဲတမ်းလေးလုပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာခိုင်းတယ်ပေါ့ ။ အဖွဲ့ ကိုတော့ သိန်း-၅၀ လောက်ဘဲအမြတ်ပြတယ် ။ အိမ်အတွက်ကားဝယ်ကြ ဘာကြပေါ့ ။ မြို မ့ရောက်တာကြာ တခါ ခပ်ကဲကဲနံမည်ကြီးလေးတွေ နဲ့ ချိတ်ပေးလိုက်တော့ တချို့ သော သူပုန်ကြိးတွေကလဲ ကြီးမှ အကျောထခွင့်ကြုံကြရတော့ ကြထကြပေါ့ ။ ဆော်လေးတွေ နဲ့ ပွားဖို့ငွေကပိုလိုလာရော ။ အဖွဲ့ ရံပုံငွေတွေ ကိုယ်ကျိုးရှာလာတော့ ငထောက်တွေ က အမြှိးဖြတ်တာ ခံလိုက်ကြရပြီ ။ အားလုံးတော့မဟုတ် ။ ဒါပေမဲ့ အများကြိးရှိခဲ့တယ် ။ ပိုင်းလုံးမင်းသမီးတဥိးဆို အဖွဲ့ တော်တော်များများ ခေါင်းဆောင်တွေ နဲ့ တွဲခဲ့ ပိုင်းပြစ်ခဲ့တယ် ။ န.အ.ဖ ကို အာခံဖို့တော့ စိတ်တောင်မကူးနဲ့။ ကိုယ်ကျိုးရှာထားတာတွေ ပွေထားတာတွေ ကို ဖွင့်ချလိုက်ရင် ။ .အဲဒီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးတွေကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ န.အ.ဖ. က ဆိုရင် မကတတ်လဲ ချိုမိုင်မိုင်လုပ်ပြကြရတော့တာပေါ့ ။
ဒီလိုပါဘဲ ။ ဗိုလ်သန်းရွှေလဲ ထိုင်းနဲ့စစ်ရေးဟန်ပြင်ပြနေတာပါ ။ ဘယ်တိုက်ရဲမှာလဲ ။ တိုက်ရင် ဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းကို ဖျက်ရတော့မယ် ။ ဖျက်ရရင် ဟိုကဖေါ်တော့မယ်လေ ။ ကျနော်ကထောင်ထဲကနေ လောင်းကြေး ခေါ်နေတာ ။ သိပ်သိပေါ့ အပြတ်ကို လောင်းကြေးခေါ် ပွဲလုပ်နေမိကြတယ် ။ ဒါကို ဥပါယ်တမျှင် လို့ ပြောမလား ပရိရာယ် လို့ ပြောမလား ။ လူကြီးလူကောင်းလိမ်တာ ကိုခေါ်တာလေ ။
အခုတရုတ်ပေးလိုက်ရတာကတော့ ရှင်းပါတယ် ။ ဗွီတို အာဏာကြေးပေးလိုက်ရတာပါ ။ ဒီထက်ပိုပြောရရင် အခြေအနေမကောင်းလို့ဆွေမျိုးပေါက်ဖေါ်တို့ ဆီ ပြေးရရင် လဲ ရှိသေးတယ်လေ ။ တကယ်တော့ တရုတ်ကလဲ သန်းရွှေ လိုခပ်ညံ့ညံ့ လူကို ကျားကန်ပေးထားရတာ သိပ်အကြိုက်တွေ့ နေတယ် ။ သူတို့ ရဲ့ဗွီတိုကိုရောင်းစားလို့ ရတဲ့သူ ဖေါက်သယ်ကြီးတဦး အပိုင်ရထားတာဘဲ ။ ထာဝရ ဖေါက်သယ်ကြိးပေါ့ ။ ဗွီတို သုံးစရာပေါ်လေ ( ၀ ) ကြိုက်လေးပေါ့ ။ ရွှေရွှေမျက်ဖြူဆိုက်လေ ယီးဇင်းကြိုက်လေပေါ့ ။
အခုကြည့် တနေ့ ကဘဲ စာဆောင်တွေမှာ ၂၀၁၀ - နစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက စွမ်းအင်(လောင်စာအတွက် ) တင်သွင်းရတာ ဒေါ်လာအားဖြင့် ( ၁.၅. )ဘီလျှံ ရှိတယ်ဆိုတာ ။ ဒါလုပ်ငန်းတွေ တိုးလာရင် ဘီလျှံပေါင်း..၃-၄ ဘီလျှံ ဖြစ်လာပါမယ် ။ မြန်မာပြည်ကထွက်တဲ့ ဓါတ်ငွေ့ တွေ အကုန်ထုတ်ရောင်းပြီး ငါတို့ လုပ်ချင်သလိုလုပ်မယ် အချိုးအတွက် မကြာခင်နစ်တွေမှာ သိလာရပါမယ် ။ အခုနေ အနောက်နိုင်ငံတွေကနေ စီးပွားရေးပိတ်ထားတာ ဖွင်ပေ့းကြည့်ပါလား ။ လောင်စာဖိုးပိုလိုလာမယ် ။ ဒီကြားထဲမှာ အတိုက်အခံတွေအနေနဲ့အနောက်နိုင်ငံကြိးတွေံကို စီးပွားကို နေ့ စားခ အနိမ့်ဆုံး-တနေ့ ကို - ၅-ဒေါ်လာပေးမှသာ လက်ခံပါ လို့အခြေအနေတခု သတ်မှတ်ထားပေ့းရန်တောင်းဆိုလိုက်ရင် ကြွဲပီ ။ လုပ်အားခတိုးပေးဖို့လောင်စာကုန်ကျမှုကို လျှော့ချရန်လုပ်ရပါတော့မယ် ။ အခုဟာက မြန်မာစက်ရုံတွေက လောင်စာအတွက်ကုန်ကျနေရတာကများနေတယ် ။
နေ့ စားအလုပ်သမားခ တိုးပေ့းလိုက်ရရင် ၀န်ထမ်းလစာတွေ စစ်သည်တော်လစာတွေ ပင်စင်စားလစာတွေ တိုးပေးလာရပါတော့မယ် ။ သမ္မတကြီးခမြာ ဒီလိုမှန်းမသိလို သမ္မတလုပ်မိပါတယ် ထအော်ယူစေရပါမယ် ။ သူ့ အတွက် ရေခဲစက်ပါတဲ့ ခေါင်းပေါင်းတီထွင်ပေးရပါမယ် ။
နောက်တခု အခုသမ္မတကြီးအကြံပေးအဖွဲ့ ကလဲ ဒီလောင်စာအတွက် ကုန်ကျမှုကို လျှော့ချဖို့ထက် ထပ်တိုးဖို့ သာစဉ်းစားရမှာပါ ။ ဘတ်ဂျက်အတွက် မလွယ်ပါဘူး ။ အဲဒါကြောင့် သမ္မတကြီးဟာ နိုင်ငံတော်ကိုတိုးတက်စေချင်တယ်ဆိုရင် န.အ.ဖ ခေတ်ကလို ပါးစပ်ထဲကပြောချင်ရာပြောလို့ ရတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူး ။ တခုခု ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ရပါတော့မယ်. ။ လောင်စာကိစ္စကို ရေရှည် စီမံကိန်းချမှတ်တာမလုပ်ခဲ့ရင် စီးပွားရေးမှာ ကွဲပါတော့မယ် ။ ဗိုလ်သန်းရွှေ ဓါတ်ငွေ့ လက်မှတ်ထိုးတုံး..၉၅- တုံးက..ရေနံစိမ်းက တပေပါ မှ- ၁၅- ၁၇ ဒေါ်လာလောက်ရှိသေးတာ ။ အဲဒီ ၁၇-ဒေါ်လာ ဈေးနုံးဟာ ၂၀၀၄ အထိ ဒီဈေးလောက်ဘဲ ရှိနေပြီး နောက်ပိုင်း ၂၀၀၆ နောက်ပိုင်းဈေဒတက်တက်လာတာ..၂၀၀၇ -နစ်မှာ ရေနံစိမ်းတစည်ကို ဒေါ်လာ-၇၀-ကျော်လာတော့ န.အ.ဖ .ဘတ်ဂျက်မကိုက်တော့ဘူး ။ အဲဒီမှာ လစာကလဲတိုးပေးထားရတယ် တိုင်းပြည်အတွက်ဈေးပေါပေါနဲ့ သုံးလို့ ရတဲ့ဓါတ်ငွေကို အတ္တ စိတ်နဲ့ ထုတ်ရောင်းထားတာ လောင်စာဈေးတွေ တက်လာတော့ ဓါတ်ဆီဈေး ဒီဇယ်ဆီဈေးတွေ တင်လိုက်တာ နိုင်ငံရေးအုံကြွမှုကြိးနဲ့ကြုံရတော့တာပါဘဲ ။
ရွှေဝါရောင် နဲ့ တွေ့ ရတော့တာပါဘဲ ။ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ အပြင်ပန်းကြည့်ရင် န.အ.ဖ.က နိုင်လိုက်တယ်ထင်ကြမှာပေါ့ ။ တလောက ဗိုလ်ရွှေ မ.ဆ.လ. လူကြိးတွေကို ဆုံပြီး သူမသိလိုက်ရပါဘူး ပြောရတယ်ဆိုကထဲက စဉ်းစားသာကြည့် ။ အပေါ်ယံမှာ နိုင်တယ် ။ တကယ်လဲ ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ ရွှေဝါရောင် ဖြစ်တော့ သူ့ လူယုံကို ကြိုပြောထားတယ် ။ အစည်းအဝေးမှာကျတော့ သူ ခေါင်းမူးနေတယ်ပြောထားပြီး မပါသလိုနေပြတယ် ။ သူ့ လက်ရုံး က ဘယ်ဘုန်းကြီး ဘယ်ခေါင်းဆောင်ကို ဘယ်လိုပြစ် အကုန်သူ့ ရှေ့ မှာ ဆွေးနွေးကြရတာ ။ သူက ပြစ်ခတ်တာ မလုပ်ခင်ကထည်းက တရက်မှာတရားခံ မဖြစ်ရအောင် ဂွင်ဆင်ထားပြီးလုပ်တာ ။
အဲဒီဟာကို မ.ဆ.လ. လူဟောင်းကြီးတွေကနေ တဆင့် ခေါင်းရှောင်ပြတာဘဲ ။ သူမသိလိုက်ရပါဘူးပေါ့ ။ ဘယ်သူနိုင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူ ရှုံးမယ်ဆိုတာ သေနတ် မပြစ်ခင်ကထဲက ..ပေါ်နေပါပြီ ။ ဇူလိုင်-ရ- ရက်နီးလာတော့ ၈၈၈၈- လုံးမှာ ကျောင်းသားသမ္မဂ ဗုံးခွဲမှုကို ဗိုလ်နေ၀င်း ခေါင်းရှောင်တာထက် ဆိုးနေပြီ ။ သူက မလုပ်ခင်ကထဲက တရားခံ ကို အပ်ထားပြီးပြီ ။
အခု ဗိုလ်သန်းရွှေ က နိုင်ငံကထွက်သမျှ ဓါတ်ငွေ့ တွေကို အကုန် ထုတ်ရောင်းစားထားတယ် ။ အခု သမ္မတ အသစ်စက်စက်ကြီးအတွက် ပိုဒုက္ခရောက်လာမှာက ရေနံစိမ်းဈေးက တစ်ပေပါ ကို ဒေါ်လာ-၁၀၀- အထက်ရှိနေတာကများနေပြီ ။ တခါ ပြည်တွင်းသုံးကလဲ ပိုများလာပြီ ။ ဓါတ်ငွေ့ ရောင်းလို့ ရတဲ့ငွေက တနစ်ကို ၂- ဘီလျှံ ဆိုတာက ထိုင်းက ၀ယ်ယူတဲ့ပမာဏ ။ အစိုးရက အဲဒီထဲက..၁၅- % ဘဲရတာ ။ ကျန်တာက ပိုက်လိုင်းရင်းနှီးထားသူ ။ ဓါတ်ငွေ့ တွင်းကိုရင်းနှီး တူးဖေါ်ထားသူတွေက ပြန်ယူသွားတာ ။ အခုရခိုင်က ရွှေ ဓါတ်ငွေ့ တွင်းဆိုရင်ပိုဆိုးတယ် ။ မြန်မာက ၁၅-% တောင်မရဘူး ။ ဒါကိုပြည်သူတွေ အကုန်လုံးကမသိတော့ အစိုးရ့လက်ထဲ တနစ်ကို ငါးဘီလျှံလောက်ဝင်နေတယ် နဲ့အတည်ပေါက် ဖိန့် နေတာ ။ အခုထိုင်းရောင်းနေတဲ့ ၂.၈ ဘီလျှံထဲက မြန်မာအစိုးရ ရတာက ဒေါ်လာ -သန်း ၄၀၀-နီးနီးလောက်ဘဲရတာ ။ အခု ကိုယ်က ရေနံပြန်ဝယ်ရတာက - ၁.၅.- ဘီလျှံ ။ ဒီဝယ်ယူရတဲ့ ပမာဏက ( စွမ်းအင် ပမာဏပေါ့ ) ကိုယ်ရောင်းထားတဲ့ ဒွတ်ငွေ့ က ရမဲ့ ပမာဏထက်အများကြီးနည်းနေပါတယ် ။
အခုနေ နိုင်ငံရေးသမားတွေက အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေက စီိးပွားရေးပိတ်ထားတာကို နေ့ စားခ ကို အနိမ့်ဆုံး..၄.၀ / ၅.၀-ဒေါ်လာ လောက်ပေးရင်လက်ခံပေးပါ ကုန်သွယ်ရေးလွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေးလာတာအပါအ၀င်ပေါ့ ကိုင်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ရင် အစိုးရ ကွသြွားပါမယ် ။ စစ်တုရင် ကစားတော့ နယ်ရုပ်လေးတွေ တင်မက ရဲတိုက်..တွေပါထိုးကျွေးတာမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့ ။ မစားလို့ ကမရ စားရင်လဲ နိုင်ငံရေး ကျိုးပေါက် ကွက် ။ အခုဖြစ်နေတဲ့ ရေနံဈေးနဲ့စီးပွားရေးတိုးချဲ့ ကြည့်ပါလား ရေနံစိမ်းတင်သွင်းဖို့ ငွေနဲ့ တင် ကွဲသွားပါမယ် ။ ရေနံစိမ်းဖိုးတင် ၃-- ၄ ဘီလျှံ ကုန်ကျပါမယ် ။
အဲဒီလို တွေးကြည့်ကြပါ ။ စီးပွားရေးပိတ်တယ် ဖွင့်မယ်ဆိုတာက နိုင်ငံရေးမှာ ဘွတ်ဘရိမ်း BUSH'S BRAIN လို့ ပြောရပါမယ်။ ဘွတ်ဘရိမ်းဘဲ သုံးပါမယ် ။ အမေရိကန်သမတကြီးမို့ကျနော် သူ့ အကြောင်းကို စကားထဲထဲ့ပြောရင် ပြောနေကျ စကားတလုံး ဖြုတ်ထားလိုက်ပါတယ် ။ အလယ်က စကားတလုံး မထဲ့တော့ပါဘူး ။ နိုင်ငံရေးမှာ ဒါက သူငယ်တန်း ဖတ်စာအဆင့်လို့ တောင်ပြောသင့်ပါတယ် ။ ကျနော်ကတော့ အမေရိကန်သမတကြိးဘွတ်ကို သိပ်အထင်မကြီးဘူး ။ သူမတော်လို့အီရက်ကို စစ်သည် ၁၅၀-တောင်မသေဘဲ နိုင်ပြီး သူ့ ဘော်ဒါကုမ္မဏီနဲ့ ၀င်အစားငမ်းလိုက်တာ အခု ၆၀၀၀-ကျော်သေရတော့တာဘဲ ။ ကုန်လိုက်ရတာလဲ သောက်သောက်လဲ ။ နောက်ဆုံးသူ မတော်လို့စီးပွားရေးပါပြိုကွဲရတာပါဘဲ ။ ကြိုမြင်ထားရင် ကာကွယ်လို့ ကျားကန်ပေးထားလို့ ရတာပေါ့ ။
( ကျနော့်မိတ်ဆွေ သမိးတဦး နဲ့ နောက်တဦးရဲ့ သား တဦးတို့၂၀၀၇ - နစ်လယ်လောက်က မြို့ ပြအင်ဂျင်နီယာတက်မယ် လုပ်တော့ ကျနော် အပြတ်တားပါတယ် ။ အမေရိကန်မှာ ဆောက်လုပ်ရေးတွေ ကွဲပြီးစီးပွားပါပျက်တော့မယ်လို့။ နိုင်ငံတခု မှာ ဘဏ်ကြီးတွေ အကြောင်း သိသလောက်လေးပေါ့ ။ လူပိန်းအသိပေါ့ ။ စိးပွားရေးပညာရှင် အသိတော့မဟုတ်ဘူးနော် ။ ဘယ်လိုချိန်ထိုးကြည့်ရတယ်ဆိုတာလေး ကျနော် သိထားတာလေး တရက် မျှဝေပေးပါ အုံးမယ် ။ )
မြန်မာနိုင်ငံကိုစီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ တယ် ။ တရုတ် နဲ့ အိန္ဒိယ အာဆီယံတွေ မပါဘဲ အကောင်အထည် လက်တွေ့ ပေါ်လာနိုင်စရာမရှိတာကို ဇွတ်လုပ်ရဲတာ အံ့သြတယ်။ ကျနော်သာ သူ့ နေရာမှာဆို မပိတ်ခင် ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ တိုးလာအောင် အရင်လုပ်လိုက်မယ် ။ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏကြိးလာပြီဆိုမှ အဲဒါနဲ့ ကိုင်စကားပြောမယ် ။ လုပ်ငန်းကြီးကြီးကို ထိုးရပ်အောင်လုပ်လိုက်ရင် တဖက်က ၀က်ဝက်ကွဲတာမျိုးဖြစ်အောင်အရင် မွှေးရတာ ။ အမေရိကန် မူဝါဒတွေက အဲဒီလို အပိုင်ကိုင်လို့ ရတဲ့ အခြေအနေအထိ စိတ်ရှည်ရှည် ချီယူလာတတ်တာ ။ ပြီးမှ အပိုင် ကိုင်လို့ ရပြီဆိုမှ လည်မျိုကိုညစ် စကားပြောတတ်ကြတာ ။ သူ့ ကျမှ ဖုတ်ပူမီးတိုက်ကောက်ခါငင်ခါထလုပ်ထဲ့တာ ။ နောက်ဆုံး ၂၀၀၇- နိုဝင်ဘာ Australia / Sydney မြို့ မှာ အင်ဒိုနီးရှားသမတ မေးတာကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ တာ မအောင်မြင့်ပါဘူး မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီး ၀န်ခံသွားရှာပါတယ် ။ ဒါကို အထဲက ပါတီကြီးတွေက ဟိုက ကျနော် လုပ်တာ မအောင်မြင်ပါဘူး ၀န်ခံထားတာကို ပိတ် ဆက်ပိတ် အော်နေတာ
ဒါကိုအခုအတိုက်အခံတွေက ပိတ်ဆို့ ရေးတောင်းဆို ဆက်တင်းခံနေကြတာ ပြန်စဉ်းစားစေချင်ပါတယ် ။ ကျနော်ပြောသလို ကန့် သတ်ချက်လေးတခုနဲ့ပြန်ဆက်သွယ်တာလုပ်ရင် နိုင်ငံရေးအရ အစိုးရကွဲသွားပါမယ် ( အသေအခြာ ) သေခြာပေါက် ကွဲစေရပါမယ် ။ ဘိလိယက် ထိုးသူတွေ အမြင်ပေါ့ ။ တခါတလေ တဖက်လူ အနီးကို ဘော်လုံးထိုးပေးထားလိုက်သလိုမျိုးပေါ့ ။ တခါတလေ ကန်နင်ရိုက်ထိုးတာမျိုးလို နောက်ပြန်ထိုးတာကို လဲ တွေးကြည့် ပုံဖေါ်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ် ။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ရေနံစိမ်းဈေးဟာ ယခုအတိုင်း ၉၀-အထက်မှာ ကြာကြာဆက်ရှိနေရင် ဓါတ်ငွေ့ တင်သွင်းပြီးစွမ်းအင်ထုတ် သုံးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေ အနုမြူစွမ်းအင်အသုံးပြုနေတဲ့နိုင်ငံတွေကို ကျနော်တို့ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေ အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ လက်မြောက်အရှုံးပေးလာရပါတော့မယ် ။ အဲဒီမှာ အလုပ်လက်မဲ့တွေ စွပ်တိုးလာပြီး တနိုင်ငံလုံး ဘာဒီမိုကရေစီ မှ မအော်ဘဲ ဆန်ပေးပါ အော်လာကြပါတော့မယ် ။ ကနေ့ လား နက်ဖန်လား ။
အဲဒီလို အော်မလာအောင် အခုနိုင်ငံတော်ကို အုပ်ချုပ်နေသူတွေက တကယ် ဘဲတိုင်းပြည်မဆူအောင် အစွမ်းကုန်ဟန့် တားပါ့မလား ။ နိုး- မဟန့် တားပါဘူး ။ တကယ်ဟန့် တားမယ်ဆိုရင် သူတို့ ခိုးထားတာတွေ ဒီမှာပြန်ရင်းနှီးမှာပေါ့ ။ သူတို့ က ပါးစပ်ကတော့ မဆူအောင်လုပ်မယ် လက်က ခိုးထားတာတွေ ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ် ပြည်ပထုတ်နေတာလေ ။ ဆူလာပါမယ် ။ သေခြာပေါက်ဆူလာပါမယ် ။
ဒီတခါဆူလာမှာက လူထုတရပ်လုံး ရှောင်လွှဲလို့ မရတော့တဲ့ ၀မ်းရေးပြသနာ ။ ဆန် တောင်းပွဲ ။ စားဖို့ ဆန် တောင်းတာကို ကျည်ဆံ နဲ့ဖြေရှင်းလိုက်ရင် ????
အခု သမ္မတကြီးရဲ့ အကြံပေးတွေ ဘာကို နံပတ်တစ် ဦးစားပေး တွေးတောနေကြပါသလဲတော့မသိ ။ စီးပွားရေးတွေ ထိုးရပ်လာနိုင်စရာရှိနေပါပြီ ။ အခုမြန်မာငွေဈေးက မာနေတယ်နော် ။ အဲဒါ ကျနော်အကြိမ်ကြိမ်ပြောနေတဲ့ စတီးရွုက် ဖြတ်လိုက်လို့တက်လာတဲ့ ပြသနာ ။ အထဲက အလွယ်တကူ ပေးချေနိုင်တဲ့ငွေမရှိတော့လို့( အသားလွတ်ဝိုက်ထားတဲ့ ကျပ်ငွေတွေ ကုန်ခမ်းသွားလို့ ) မြန်မာငွေခိုင်မာသလိုလိုနော် ။ မြန်မာငွေဟာ ဒီထက်ပို မာလာနိုင်ပါမယ် ။ အဲဒါကောင်းသော ခိုင်မာမှုမဟုတ်ဘူး ။ ပြီး စီးပွားရေးတွေလဲ ထိုးရပ်ကော ။ အဲဒီလိုဖြစ်လိုက်တာနဲ့လက်ထဲမြန်မာငွေကိုင်ထားသူတွေက ဒေါ်လာကိုအလုအယက် ပြန်ဝယ်တာလုပ်လာပါမယ် ။ အဲဒီကျရင် မြန်မာငွေဈေး ပြန်ထိုးကျပြီး currency crash ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။ ၉၇- ထိုင်းငွေဈေးကျသလို အတော်လေးနီးစပ်နေပါပြီ ။
မြန်မာတွေ အခုနေတော့ မြန်မာငွေကိုကိုင်ထားကြပါ ။ သတိတော့ လျှင်လျှင်သာထားကြပါ ။ စီးပွားရေးတွေ တန့် လာတာနဲ့မြန်မာငွေကို အမြန်ဆုံးသာထုတ်ကြပေတော့ ။ နောက်ကျတဲ့သူ နောက်ချေးနဲ့ သလဲဘဲ ။ အခုတခေါက်မြန်မာငွေတန်ဖိုး ပြန်ကျရင်အိမ်တွေ မှာရင်းနှိးထားသူတွေက ပိုနာပါမယ် ။ အဲဒိမှာ အိမ်ဈေ့းက ထိုင်းမှာဖြစ်တာထက် အခုအမေရိကန်မှာဖြစ်တာထက် ၃ / ၄ ပြန်ပိုနာပါမယ် ။ သူတို့ နဲ့မတူတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ တာဆူနေတာ တခုရှိနေလို့ ပါ ။ အခုအမေရိကန်မှာအိမ်ဈေးက ပြောရင်တောင်သိပ်ယုံရခက်အောင်ကျသွားပါပြီ ။
မြန်မာပြည်မှာ ငွေဈေးကျတော့ ထိုင်းဖြစ်တုံး ကလို အာဆီယံတခုလုံးကို ဂယက်ကူးဆက်မှုမျိုး ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီကျရင် အစိုးရက နိုင်ငံတကာငွေကျေးရ့ပုံငွေအဖွဲ့ ကြီးကို ထောက်ပံ့ငွေ တောင်းရပါတော့မယ် ။ အဲဒီကျရင် ပြင်မရအောင်လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ နာဂစ်ဥပဒေကြိး...ဟဲဟဲ ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ ။ ပြင်မရဘူးဆိုတာကြီး ဒူးထောက်သွားစေရပါမယ် ။ ပြင်မရဘူး ပျက်သါားပါမယ် ။ ၁၉၉၇- ခုနစ် အာရှငွေဈေးပြိုကွဲတော့ အာရှရဲ့ ကျားကြီး တကောင်အဖြစ် န.၀.တ. က ကိုးကားဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှား သမတကြီး ဆူဟာတိုဟာ ငွေကြေးပြိုကွဲလာတော့ နောက်ဆုံး ကမ္ဘာငွေကြေးရ့ပုံငွေအဖွဲ့IMF ( International Monetary Fund ) အဖွဲ့ ဆီကနေ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို လက်ခံခဲ့ရပါတယ် ။ အဲဒီငွေကြေးအဖွဲ့ က ဒီလိုမဖြစ်ခင်က နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး အကြံ ပြုဘူးပါတယ် ။ လက်မခံခဲ့ံပါဘူး ။
သူ့ ငွေကြေးလဲ ပြိုကွဲရော IMF က ချမှတ်တဲ့နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြာင်းလဲရေးလုပ် ပါမယ်ဆိုတဲ့ မူကို အရင်လက်ခံရပါတယ် ။ သူတို့ ချမှတ်ပေးတာကိုလက်မခံဘဲ ငွေထုတ်မချေးပါဘူး ။ ဒီလိုထုတ်ချေးတာက အဲဒီလိုစီးပွားပျက်ချိန်ဆို ဘယ်သူကမှ မချေးတော့တဲ့အချိန်လေ ။ ဟိုကချေးတာက ကူညီတဲ့အနေနဲ့ ချေးတာ ။ အဲဒီတော့ အင်ဒိုနီးရှားသမတကြီးဆူဟာတို ဟာ IMF ငွေကြေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ( ) ရဲ့ ရှေ့ မှာ ဟိုက ကလေးတယောက်အပြစ်ရှိလို့ ဆုံးမ ထားသလို လက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့ မျက်လုံး မျက်နာထားတင်းတင်း အောက်မှာ ကျုံ့ကျုံ့ လေး နဲ့လက်မှတ်ထိုးနေရတဲ့ပုံ ကိုမျက်စေ့ထဲက မထွက်ပါဘူး ။ ဟိုကမာမာပြောသလောက် မျက်နာလေးကြို့ ပြီး မျက်နှာချိုသွေး လက်ခံခဲ့ရတာပါ ။ လက်မှတ်ထိုးပြီးတာနဲ့ပြုပြင်ရေးထဲ ပါထားတဲ့သဘောတူညီချက်အတိုင်း အာဏာ လက်လွှတ်ပေးလိုက်ရပါတယ် ။
အဲဒီလက်မှတ်ထိုးတာကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး ၈ျပန်လက်နက်ချတော့ ဂျပန်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက မစ်ဇူရီ စစ်သင်္ဘောကြီးပေါ်မှာ အမေရိကန် ပိစ္စဖိတ် ရေတပ်စစ်ဦးစီချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဒေါက်ဂလပ် မက်အာသာ ရဲ့ ရှေ့ မှာ ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကို အမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ်က လူရာမသွင်းတဲ့ ပုံစံနဲ့( မင်းတို့လက်နက်ချတဲ့ စာချုပ်ပါအချက်တွေကို လက်ခံလား ..အဆင့်သင်ဖြစ်ပြီလား.). နဲ့အသံက ခွေးယေက်သလို နဲ့မေးတယ် ။ အမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ်ကြိးက ဂျပန်တွေရဲ့ မျက်နာ ကို မကြည့်ဘူး ။ လက်ကိုခါးမှာထောက်ထားပြီး အဆင့်သင်ဖြစ်ရင်လက်မှတ်ထိုး ဟိုကထိုးကြရပါတယ် ။ ပြီးပြီလား ဆင်းတော့ တဲ့။
ဆူဟာတို ဒူးမထောက်ရရုံတမယ် လက်မှတ်ထိုး ခဲ့ရတာကို ဂျပန် လက်နက်ချရတာ နဲ့ တူနေတယ်လို့မီဒီယာကြီးတွေက ခိုင်းနိုင်းထားခဲ့ကြပါတယ် ။ အခုကျနော်တို့ သမတကြိးလဲ သမတလုပ်ရတာမှ လေးလ မရှိသေးဘူး IMF က ကိုင်တာခံရမဲ့ ကိန်း ဘက်ကို လှမ်းနေပါပြီ ။ သမ္မတကြီး အစိုးရက လဲ အင်ဒိုနီးရှားကိုပုံတူကူးထားတာလေ ။ လွှတ်တော်မှာ စစ်ဗိုလ် -၂၅-% ဆိုတာ အင်ဒိုနီးရှားက ပုံစံကိုယူထားတာ ။ ကမ္ဘာမှ ဘယ်နိုင်ငံမှာမရှိတဲ့စံနစ်လေ ။ နောက် နောက်ခံထားတာကလဲ အင်ဒိုနီးရှား မှာက ဂေါ့်ခါး ပါတီ ။ ဒီမှာက ကြံ့ ခိုင် ။ တနင်္လာနံ နစ်လုံးပူးယူထားတာ ။ ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ ။ ၂၅- % နဲ့တနင်္လာ နံပူး ။
ဟိုကဒူးထောက်ရတော့ အစိုးရသက်တမ်းက နစ်က ၃၂- နှစ်လောက်ရပြီ ။ အာရှ ကျားကြိးလို့သတ်မှတ်ခံလိုက်ရှာသေးတယ် ။ ဒီက အခုမှ သုံးလသားလေး ။ သုံးလသားဆိုတော့ လေးဘက်တောင် မမှောက်တတ်သေးဘူး ။ ဒူးဘယ်လိုလုပ်ထောက်မလဲတော့မသိဘူး ။ နို့ ဘူးတန်းလန်းနဲ့။ တခါ IMF နဲ့ တွေ တော့ ဟိုက ဥက္ကဌ အသစ်စက်စက်ပူပူနွေံးနွေးက ပြင်သစ်သူ အမျိုးသမိး ။ ကြည့်ကောင်းပြီ ။ မိန်းမအုပ်ချုပ် တိုင်းပြည်ပျက်မယ် ဆိုတဲ့သူတွေ နဲ့ပြင်သစ်မကြီးနဲ့။ တွေးကြည့်ရင် ဘယ်လောက်မျက်နှာငယ်ရှာရမလဲလို့။
သမ္မတကြိး အကြံပေးအဖွဲ့ ဝင်များလဲ စစ်ဖြစ်တဲ့နစ်မှ စစ်ထဲဝင်မိသလို ဖြစ်နေကြပါတယ် ။ နိုင်ငံကထွက်တဲ့ ဓါတ်ငွေ့ ကို တိုင်းပြည်အတွက်ပြန် သု့းဖို့ အခု ချက်ချင်း ( အရေးပေါ် ) မလုပ်ရင် လူထုအုံကြွမှုကို ဖြေရှင်းဖို့ဝါးရင်းဒုတ် သင်တန်းကိုအမြန် လေ့ကျင့်ထားပေတော့ ။ GAS ကိုပြည်တွင်းသုံး ဖို့အရေးပေါ်ပြန်မစီစဉ်ကြရင် GUARD ဂါတ်တဲ ထဲလူတွေ ဖမ်းထဲ့ဖို့ဂါတ်တဲတွေ အမြန်ဆောက်ကြပေတော့ ။
အချုပ်အနေနဲ့ ပြောရရင် သမ္မတကြိးဦးသိန်းစိန်ဟာ ဗိုလ်ရွှေ ပေါက်ကရလုပ်ခဲ့တဲ့ အရှုပ်ထုပ်ကြီး ဗြမ္မာကြိးခေါင်းကို ကိုင်ထားရတဲ့ဘ၀ကိုရောက်နေပါတယ် ။ လွယ်ကူသောပြသနာမဟုတ်ပါဘူး ။ ပေါ့သေးသေး မထင်ကြပါနဲ့။ ဗိုလ်ရွှေ ရှုပ်ထားတဲ့ အရှုပ်ထုပ်ကို ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ ဆွေမျိုးပေါက်ဖေါ်ကရော တကယ် ခင်ဗျားတို့ အပေါ် စိတ်ရင်းစေတနာ အမှန်ရှိတယ်ထင်နေလို့ လား ။ အခုမကြာခင်လောင်စာ အကျပ်အတည်းကြောင့်စီိးပွားရေးတွေ ထိုးရပ်လာရင် သူကခင်ဗျားတို့ ကို သူ့ ယူထားတဲ့ ဓါတ်ငွေ့ မျှသုံးကြတာပေါ့ လုပ်ပေး မျှပေးလာမယ် ထင်ပါသလား ။
မိတ်ဆွေအစစ်လားဆိုတာ မကြာခင်ပေါ်လာပါမယ် ။ ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ဗျာ ။
နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲံ့စီးပွားရေးကို ဟောကိန်းထုတ် ကြိုတင်ရေးရတာ အင်မတန် တာဝန်ကြီးပါတယ် . ကျနော်ဆီမှာ အချက်အလက်ကလဲ ပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိပါ ။ အခုမှန်းဆချက်က သိပ်ထင်သာမြင်သာရှိလာနေလို့ သာရေးရဲတာပါ ။ တတ်လွန်းလို့ မဟုတ်ရပါဘူး ။ ဆင်ကြီးလာနေတာ မမြင်ရသေးပေမဲ့မြေတုန်နေတာနဲ့ ခန့် မှန်းနိုင်ပါပြီ ။ သစ်ပင်တွေ ကိုဆင်တိုးလို့သစ်ပင်တွေ ကြိုးသံ ကိုနားထောင်တတ်ရင် လဲ ခန့် မှန်းနိုင်ပါတယ် ။ အပေါ်က ၄က်တွေ ဆူညံနေသံတွေ လှိုင်နေပါပြီ ။
ဆက်လက် တင်ပြပါဦးမည် ။
ရှပ်ရှင်မင်းသား အကယ်ဒမီ ( ဦးကျော်သူ )....သို့......
ကျွန်တော် ဒီပိုစ့်ကို ရေးသင့် ၊ မရေးသင့် ။ တင်သင့် ၊ မတင်သင့် စဉ်းစားနေတာပါ ။ ဦးကျော်သူ တို့ လို
စံပြပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ အတွက် ကျွန်တော်လို လူမျိုးရေးတာကို ရီ ကောင်းရီပါလိမ့်မယ် ။ သေးသေးလေး မှ
သည် အကြီးကြီးဆီသို့ဆိုသည့်အတိုင်း ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲမှာစိုးလို့တင်လိုက်ရခြင်းသာဖြစ်ပါသည် ။
ရုပ်ရှင်မင်းသား အကယ်ဒမီ (ဦးကျော်သူ) ဟာ ကျွန်တော်အတွက်တော့ အလွန်
လေးစားထိုက်သော လူတစ်ယောက်ပါ ။ ရုပ်ရှင်မင်းသား အကယ်ဒမီ (ဦးကျော်သူ) ဆိုတာနဲ့နာရေး
ကူညီမှုအသင်း ကိုပါတွဲပြီးမြင်ယောင်မိကြမှာပါ ။ ဟုတ်ပါတယ် (ဦးကျော်သူ)ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက လူ
တွေအတွက် လူတန်းစားမရွှေး သူ့ ရဲ့ စေတနာ ၊ မေတ္တာတွေကို ပေးဆပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး တစ်ယောက်
ပါ ။ ဒီလိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကြောင်းကို ရေးမယ်ဆိုတော့ အတော့်ကို သတိထားရပါတယ် ။
တစုံတခု မှားယွင်းခဲ့ရင် ကျွန်တော် အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ် ။ ဦးကျော်သူ ရဲ့ပေးဆပ်ခြင်းဟာ
တန်းဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့်လည်း ပြည်သူ့ ဂုဏ်ရည်ဆု ကိုရရှိခဲ့တာပါ ။ ဦးကျော်သူ ဆိုတဲ့ နာမည်
ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူ ၊ ပြည်သားတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ အမြဲတမ်း မှတ်တမ်းတင်နေမည့် နာမည် တစ်ခုပါ ။
ဒါကြောင့်လည်း အမှားအယွင်းမရှိအောင် တင်ပြရခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလို တင်ပြမှု မှားယွင်းခဲ့ရင်
တောင်းပန်ပါကြောင်း ထပ်လောင်းပြောဆိုပါရစေ ခင်ဗျာ ။
ကျွန်တော် တို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံလို့အားလုံးက အသိအမှတ်ပြုထားကြ
ပါတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း လက်ညိူးထိုးမလွဲအောင် စေတီ ၊ ပုထိုးတွေပေါများလှပါတယ် ။ ဘုရား ၊
တရား ၊ သံဃာ ကိုကြည်ညိုကြတာ မြန်မာနိုင်ငံ သူ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ဘယ်သူမှလိုက်မမှီဘူးလို့ 
ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် ပြောချင်တဲ့ အဓိကအကြောင်းကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၀င်တွေဟာ ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ ဆိုပြီး တတန်းထဲထားကြပါတယ် ။ ဘုရားသားတော်တွေ ဖြစ်တဲ့
သံဃာတော်တွေ ကိုလည်း ဘုရားနဲ့ တတန်းထားပြီး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ကြပါတယ် ။ ဒီလို ဘုရားနဲ့တတန်းထဲထားပြီး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ကြတဲ့ သံဃာတော်တွေကို ဘယ်လို ပူဇော်မှုမျိုးနဲ့ကန်တော့
အောက်ကပုံကို ကြည့်ပါ ။
ဒါဟာ ဘုရားသားတော် သံဃာတစ်ပါးနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်မင်းသား(ဦးကျော်သူ) နဲ့အခြား တစ်ယောက်
တို့ထိုင်ခုံတစ်ခုံမှာ အတူယှဉ်တွဲ ထိုင်နေကြတာပါ ။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာက ဗုဒ္ဓဘာသာ မှာ ဘုရား နဲ့ 
သံဃာ ကို တတန်းတည်း ထားပြီးကိုးကွယ်နေကြရဲ့ သားနဲ့၊ ဘာဖြစ်လို့ယခုလို သံဃာတော် တွေနဲ့ 
အတူယှဉ်တွဲ ထိုင်ကြရတာလဲ ခင်ဗျာ ။ ဒါဆိုရှင် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် နဲ့အတူယှဉ်တွဲ ထိုင်သလိုဖြစ်မနေဘူးလား ခင်ဗျာ ။
တခြား သာသာဝင်တွေ အနေနဲ့ ကြည့်ရင် ဘယ်လိုအမြင်မျိုး ရှိမယ်ဆိုတာကိုပါ သုံးသပ်သင့်ပါ
တယ်။ ဦးကျော်သူ တို့ လို စံပြပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကတောင် ဒီလိုပြုမှုမယ်ဆိုရင် တခြားလူတွေ အနေနဲ့ .....? ။
မိမိ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကို မိမိကိုယ်တိုင် လေးစားလိုက်နာကျင့်သုံးမှ တခြားဘာသာဝင်တွေဟာ လေး
စားလိုက်နာမှာပါ ။ ဒီလို အတူယှဉ်တွဲ ထိုင်နေတာကို တခြား ဘာသာဝင်တွေ အနေနဲ့မြင်တွေ့ သွားရင်
မိမိတို့ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်နေကြတဲ့ သံဃာတော်တွေကိုလည်း အမြင်တမျိုးရောက်သွားနိုင်ပါတယ် ။
သံဃာတော်တွေ အနေနဲ့ ကလည်း ဒီလိုပြုမှုလာရင် ကျောသား ၊ ရင်သား မခွဲခြားပဲ ဆုံးမပြုပြင်သင့်ပါ
တယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ် ။ အလှူအတန်း ကိုမျှော်ကိုးပြီးလို့ ဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အားနာလို့ ဘဲဖြစ်ဖြစ်
ဆုံးမသင့်တာကို မဆုံးမဘူးဆိုရင်တော့ သံဃာတော်တွေပါ အပြစ်မကင်းဘူး လို့ ထင်မြင်ယူဆမိ
ပါကြောင်း ရေးစားလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ ။။။။။။။။။။
လေးစားလျှက် ( စိုင်းမြင့်ထွန်း )
Posted by Kosai Wanna at 17:16 No comments:
မေးလ် ထဲရောက်လာတဲ့ ကဗျာလေး တပုဒ်ကို ကြိုက်လို့ တင်လိုက်တာပါ ။ ရိုင်း
ရင်တော့ ခွင့်လွတ်ကြပါဗျာ ။ မူရင်း မပျက်ချင်လို့ ဒီအတိုင်းတင်လိုက်တာပါ ။
Posted by Kosai Wanna at 17:14 No comments:
ကျွန်တော် တို့ နိုင်ငံ ရဲ့ အိမ်နီးနားခြင်းနိုင်ငံ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဘာဘူကြီးတို့န်ိုင်ငံ ကလက်ရာတွေပါ....
နောက်ထပ် ကျန်တာလေးတွေက ပိုလှမယ်ထင်တယ်ဗျာ ။ ကျွန်တော် လည်း မအားလို့ဘလော့ထဲ
မ၀င်ဖြစ်ဘူးဗျာ....လာလည်ကြတဲ့မိတ်ဆွေ တွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ.....
Posted by Kosai Wanna at 17:50 1 comment:
အလွန်တရာ သနားစရာကောင်းသော လူဖြစ်ကျိုး မနပ်တဲ့လူတွေလို့ပြောရတော့မှာလား ။
သင် ထမင်းတလုပ်စားရတိုင်း သူတို့ ကို သတိရပါ ။
မိတ်ဆွေ သင့်မှာရှိတဲ့ ကိုယ်ခြင်းစာတရားလေးကို ထိုလူတွေအတွက် တစုံတခုရေးပေးလိုက်ပါနော်...
Posted by Kosai Wanna at 19:322comments:
တရုတ်လုပ် အမျိုးသမီးသုံး ဆံပင်ခေါင်းစည်းကြိုးနဲ့...